မန်ယူအသင်းမှာ ကျောနံပါတ်(၇)ကျိန်စာမိနေတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာနေပါပြီ
မန်ယူအသင်းရဲ့ နံပါတ်(၇)ကျိန်စာဆိုးက ဘယ်တော့မှ ပျက်ပြယ်နိုင်မှာလဲ
1 Nov 2018 . 2:32 PM
အသင်းတိုင်းမှာ ဂန္ထ၀င်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောနံပါတ်တွေက ရှိပြီးသားပါ။ ဥပမာာစီလိုနာမှာဆိုရင် ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ် (၁၄)၊ နာပိုလီမှာဆိုရင် အာဂျင်တီးနားဂန္ထ၀င် မာရာဒိုနာ Maradona ရဲ့ ကျောနံပါတ်(၁၀)၊ အေစီမီလန်မှာ ကျောနံပါတ် (၃) စသဖြင့်ပေ့ါ။ ဒီလိုပဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး မန်ယူအသင်းမှာ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာက နံပါတ် (၇)၊ (၁၀) ကျောနံပါတ်တွေပါပဲ။ ဒီနံပါတ်တွေကို ၀တ်ဆင်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာက တော်ရုံအရည်အချင်းမျိုးနဲ့ မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျောနံပါတ် (၇)ဂျာစီက မန်ယူအသင်းသာမက ပရိသတ်တွေပါ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားပြီး အဲဒီနံပါတ်ပိုင်ရှင်ကလည်း အသင်းအတွက် အောင်မြင်မှုရအောင် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ လိုတယ်။
မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ ထင်ရှားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့သူ ကျောနံပါတ်(၇)ပိုင်ရှင် ကစားသမားတွေ အများကြီးပါ။ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားပါပဲ။ ဂျော့ခ်ျဘတ်စ် George Best ၊ ဘရိုင်ယန်ရော့ဘ်ဆင် Bryan Robson ၊ ကန်တိုနာ Eric Cantona ၊ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ် David Beckham ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့ဆိုတာ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး။
ဒီလိုပဲ၊ နံပါတ်(၇)၀တ်ပြီး အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကစားသမားတွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပါပဲ။ လီရှပ် Lee Sharpe ၊ အိုဝင် Michael Owen ၊ ဗလင်စီယာ Antonio Valencia ၊ ဒီမာရီယာ Ángel Di María ၊ ဒီပိုင်း Memphis Depay တို့ကအစ အခုနောက်ဆုံး အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် အထိဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းမှာ နံပါတ်(၇)ဆိုတာကလည်း နတ်ကြီးတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား။
ဒီနံပါတ်ပိုင်ရှင်ဟာ ကြီးမားတဲ့ ဖိအား၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သလို အဲဒါတွေကို ကျော်လွှားပြီး အသင်းအတွက် အောင်မြင်မှု ရအောင် ယူဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို နောက်ပိုင်း နံပါတ်(၇)ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ အရင့်အရင် နောင်တော်ကြီးတွေလို အောင်မြင်မှု ရယူနိုင်ခဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး။ ၂၀၁၂-၁၃၊ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီတုန်းက ဗလင်စီယာ အဲဒီနံပါတ် ၀တ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ဖိအား ဒဏ်တွေ မခံနိုင်လို့ နောက်ဆုံး အရင် ကျောနံပါတ်(၂၅)ကိုပဲ ပြန်ဝတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။
အခုလည်း မန်ယူအသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ် (၇)ပိုင်ရှင် အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sanchez တစ်ယောက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရဆဲပဲ။ အသင်းကနေ ထွက်မလိုတောင် သတင်းတွေ ထွက်နေပြီ။ မန်ယူကို စစရောက်လာတုန်းက ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးမားမားထားခဲ့တဲ့ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် အခုအချိန်အထိ မျှော်လင့်သလောက် ဖြစ်မလာသေးဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒို မရှိတော့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စပြီး ကျောနံပါတ်(၇)ကျိန်စာဆိုးကို မကျော်ဖြတ်နိုင်သေးတာက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု နီးပါးရှိလာပြီ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်(၇)ကျိန်စာက ဘယ်အချိန်မှ ပျက်ပြယ်နိုင်မှာလဲ . . . . .
မန်ယူအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် နံပါတ်(၇)၀တ်ဆင်ခဲ့သူများ
Alexis Sanchez (17-18 Currnet), Memphis Depay (15/16 – 16/17), Ángel Di María (14/15), Antonio Valencia (12/13 – 13/14), Michael Owen (09/10 – 11/12), Cristiano Ronaldo (03/04 – 08/09), David Beckham (95/96 – 02/03), Eric Cantona (92/93 – 96/97), Andrey Kanchelskis (91/92 – 94/95), Bryan Robson (81/82 – 93/94), Danny Wallace (92/93), Neil Webb (90/91), Lee Sharpe (90/91), Clayton Blackmore (85/86 – 90/91), Mike Duxbury (87/88 – 89/90), Russell Beardsmore (89/90), Gordon Strachan (86/87), John Sivebaek (85/86), Paul McGrath (84/85 – 85/86), Steve Coppell (76/77 – 81/82), Chris McGrath (77/78), Willie Morgan (73/74), George Best (65/66 – 67/68), William Anderson (65/66), John Connelly (64/65 – 65/66), Jimmy Ryan (65/66),
Photo:Evening Standard,squad numbers blog,f soccer,Getty Images,goal
မနျယူအသငျးရဲ့ နံပါတျ(၇)ကြိနျစာဆိုးက ဘယျတော့မှ ပကျြပွယျနိုငျမှာလဲ
အသငျးတိုငျးမှာ ဂန်ထဝငျလို့ သတျမှတျထားတဲ့ ကြောနံပါတျတှကေ ရှိပွီးသားပါ။ ဥပမာာစီလိုနာမှာဆိုရငျ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျ (၁၄)၊ နာပိုလီမှာဆိုရငျ အာဂငျြတီးနားဂန်ထဝငျ မာရာဒိုနာ Maradona ရဲ့ ကြောနံပါတျ(၁၀)၊ အစေီမီလနျမှာ ကြောနံပါတျ (၃) စသဖွငျ့ပေ့ါ။ ဒီလိုပဲ ပရီးမီးယားလိဂျ ထိပျသီး မနျယူအသငျးမှာ ဂန်ထဝငျနံပါတျလို့ သတျမှတျရမှာက နံပါတျ (၇)၊ (၁၀) ကြောနံပါတျတှပေါပဲ။ ဒီနံပါတျတှကေို ဝတျဆငျကစားခှငျ့ရဖို့ဆိုတာက တျောရုံအရညျအခငျြးမြိုးနဲ့ မရပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ကြောနံပါတျ (၇)ဂြာစီက မနျယူအသငျးသာမက ပရိသတျတှပေါ အမွတျတနိုး တနျဖိုးထားပွီး အဲဒီနံပါတျပိုငျရှငျကလညျး အသငျးအတှကျ အောငျမွငျမှုရအောငျ ခွစှေမျးပွနိုငျဖို့ လိုတယျ။
မနျယူအသငျးနဲ့အတူ ထငျရှားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့သူ ကြောနံပါတျ(၇)ပိုငျရှငျ ကစားသမားတှေ အမြားကွီးပါ။ ပရိသတျတှေ သိပွီးသားပါပဲ။ ဂြော့ချြဘတျဈ George Best ၊ ဘရိုငျယနျရော့ဘျဆငျ Bryan Robson ၊ ကနျတိုနာ Eric Cantona ၊ ဒေးဗဈဘကျခမျ David Beckham ၊ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo တို့ဆိုတာ အထူးပွောစရာ မလိုပါဘူး။
ဒီလိုပဲ၊ နံပါတျ(၇)ဝတျပွီး အောငျမွငျမှု မရခဲ့ကစားသမားတှလေညျး တဈပုံတဈပငျပါပဲ။ လီရှပျ Lee Sharpe ၊ အိုဝငျ Michael Owen ၊ ဗလငျစီယာ Antonio Valencia ၊ ဒီမာရီယာ Ángel Di María ၊ ဒီပိုငျး Memphis Depay တို့ကအစ အခုနောကျဆုံး အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ အထိဖွဈပါတယျ။ မနျယူအသငျးမှာ နံပါတျ(၇)ဆိုတာကလညျး နတျကွီးတယျလို့ပဲ ဆိုရမလား။
ဒီနံပါတျပိုငျရှငျဟာ ကွီးမားတဲ့ ဖိအား၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရမှာဖွဈသလို အဲဒါတှကေို ကြျောလှားပွီး အသငျးအတှကျ အောငျမွငျမှု ရအောငျ ယူဆောငျပေးနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို နောကျပိုငျး နံပါတျ(၇)ကို ဝတျဆငျခဲ့သူတှထေဲမှာ အရငျ့အရငျ နောငျတျောကွီးတှလေို အောငျမွငျမှု ရယူနိုငျခဲ့သူ သိပျမရှိပါဘူး။ ၂၀၁၂-၁၃၊ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီတုနျးက ဗလငျစီယာ အဲဒီနံပါတျ ဝတျဆငျခဲ့ပမေယျ့ ဖိအား ဒဏျတှေ မခံနိုငျလို့ နောကျဆုံး အရငျ ကြောနံပါတျ(၂၅)ကိုပဲ ပွနျဝတျခဲ့ရဖူးတယျ။
အခုလညျး မနျယူအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ (၇)ပိုငျရှငျ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ Alexis Sanchez တဈယောကျ ခွစှေမျးပွနိုငျဖို့ ရုနျးကနျနရေဆဲပဲ။ အသငျးကနေ ထှကျမလိုတောငျ သတငျးတှေ ထှကျနပွေီ။ မနျယူကို စစရောကျလာတုနျးက ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ခကျြ ကွီးကွီးမားမားထားခဲ့တဲ့ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ အခုအခြိနျအထိ မြှျောလငျ့သလောကျ ဖွဈမလာသေးဘူး။ စီရျောနယျလျဒို မရှိတော့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှဈက စပွီး ကြောနံပါတျ(၇)ကြိနျစာဆိုးကို မကြျောဖွတျနိုငျသေးတာက ဆယျစုနှဈတဈခု နီးပါးရှိလာပွီ။ မနျယူအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ(၇)ကြိနျစာက ဘယျအခြိနျမှ ပကျြပွယျနိုငျမှာလဲ . . . . .
မနျယူအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ နံပါတျ(၇)ဝတျဆငျခဲ့သူမြား